Quintessential Quintuplet - सीजन2प्रीमियर मिति - पालना दृश्य
Quintessential Quintuplet - सीजन २
by लिली गार्सिया 8th डिसेम्बर 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Quintessential Quintuplet मा - सीजन २ प्रिमियर मिति
Quintessential Quintuplet रूपमा चिनिने anime धेरै सफलता मात्र गत वर्ष जारी भएको देखेको छ। एनिम लोकप्रिय मa्गाबाट लिइएको हो र चित्रण गरिएको छ नेगी हरुबा। त्यसोभए के यो एनिम यति लोकप्रिय बनाउँछ? र Quintessential Quintuplet एक मौसम2को लागी फर्कने छ? त्यो हो जुन हामी यस लेखमा छलफल गर्नेछौं तर पहिले हामीलाई केहि चीजहरू जान्नु आवश्यक छ। यी हुन्: अन्त्य, पात्रहरू, प्लॉट र सान्दर्भिक जानकारी लेखक र मa्गा श्रृंखला आफैंको बारे।
अवलोकन - Quintessential Quintuplet - सीजन 2
Quintessential Quintuplets पढ्न मन पराउने Futaro Uesugi को रूपमा चिनिने एक विद्यार्थीको कथा अनुसरण गर्दछ। फुतारोले इचिका नाकानो, निनो नाकानो, मिकु नाकानो, योत्सुबा नाकानो र अन्तमा इटुसुकी नाकानोलाई भेट्छ। लामो stpory छोटो Futaro Quintuplet निजी शिक्षक हुन्छ, तिनीहरूलाई शिक्षक प्रदान गर्ने कसम ताकि तिनीहरूले आफ्नो परीक्षा पास गर्न सक्छन्। साथै सिंहावलोकन मौसम निर्णय गर्न महत्वपूर्ण छ वा छैन त्यहाँ Quintessential Quintuplet सीजन2हुनेछ।
केवल समस्या यो छ कि तिनीहरू अध्ययन को बारे मा खुसी छैनन् Futaro आफ्नो शिक्षक को रूपमा छोड्नुहोस्, जो कोही तिनीहरूलाई तल देख्न। Futaro क्विन्टअपलेट्स बुबाले भाडामा लिएका छन् उनीहरूको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि। Futaro सचेत बनाएको छ कि यदि यो भएन भने त्यहाँ समस्या हुनेछ, आफ्नो काम को समाप्ति सहित।
मुख्य चरित्र - Quintessential Quintuplet - सीजन 2
यस शृ in्खलाको हाम्रो मुख्य पात्र फुन्टारो उसुगी हो, जुन क्विन्टअपलेट्स स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। ऊ क्विन्टअपलेट्सको जस्तै उमेर हो तर उनीहरूसँग धेरै भिन्न छ। ऊ मेरो विचारमा धेरै सम्बन्धित छैन र यसले उसलाई सहानुभूति दर्साउन गाह्रो बनाउँछ। मैले कहिल्यै अध्ययन गरेको र परीक्षामा यति समर्पित कसैलाई देखेको छैन कि यसले लगभग मलाई मन नपर्ने गर्दछ, म त्यसको दृढ संकल्पको प्रशंसा गर्दछु।
यो मुख्य चरित्र सबै Quintessential Quintuplet सीजन २ मा एक उपस्थिति बनाउनेछ। उहाँ भन्दा एक राम्रो औसत चरित्र छ र त्यहाँ वास्तवमा धेरै छैन कि उनलाई बाहिर खडा गर्दछ, Quintuplet संग आफ्नो गतिशील को अलावा।
उप क्यारेक्टरहरू - Quintessential Quintuplet - सीजन २
उप पात्रहरू स्पष्ट रूपमा सबै बहिहरुका साथसाथै उनीहरूका बुवा र फुतारोको कान्छी बहिनीको हुन्छन्। Quintessential Quintuplet का सबै उप क्यारेक्टरको केहि अर्थ छ र ती सबै प्राय नै महत्वपूर्ण छन्। ती सबै राम्रा यादगार पनि थिए र मैले बिर्सनु भएन वा तिनीहरूलाई कुनै पनि मनपर्दैन। यी सब क्यारेक्टरले सबै Quintessential Quintuplet सीजन २ मा देखा पर्नेछ।
सीजन १ को अन्त्य - Quintessential Quintuplet - सीजन 1
सीजन १ को अन्त्यले अन्त देख्यो जहाँ फुटरो र क्विन्टअपलेट्स मध्ये एकले उनलाई विवाह गर्‍यो। यो भविष्यको दृश्य हो जुन ठाउँ लिने छ। यो पनि धेरै निर्णायक थिएन। त्यसैले हामी देख्न सक्छौं कि Futaro क्विन्टअपलेट्स मध्ये एक विवाह गर्न गइरहेको छ, यो स्पष्ट छ जहाँ श्रृंखला जाँदैछ।
हामी केवल प्रतीक्षा गर्न को लागी जाँदैछौं र ऊ कसले छनौट गर्यो। यो एकदम सस्पेन्सफुल हुने छ र यो पाठक वा दर्शकलाई व्यस्त राख्नको लागि एक उत्तम तरिका हो। अन्तको मतलब मूलतः यसको मतलब यो छ कि Quintessential Quintuplet सीजन2हुनेछ।
त्यहाँ एक मौसम2हुनेछ - Quintessential Quintuplet - सीजन 2
Quintessential Quintuplet को पहिलो सीजन मूल रूपमा जनवरी १०, २०१ 10 - मार्च २,, २०१ 2019 बीचमा चलेको थियो, त्यसैले झन्डै एक बर्ष पहिले। यो सबै भन्दा लामो छैन र यो बोल्नको लागि एकदम नयाँ एनिमेस हो। पहिले हामीले हेर्नु पर्छ र हेर्नुहोस् कि सामग्री छ कि छैन। यसको मतलब यदि सामग्री दोस्रो सत्रको लागि आवश्यक छ र अर्को अनुकूलन।
हाल क्वान्टेन्सेन्टल क्वान्टअपलेट्सको vol खण्डहरू paper पेपरब्याक संस्करणहरू सहित उपलब्ध छन्। Quintessential Quintuplet को एनीम अनुकूलन मात्र9खण्डहरू कभर गर्दछ, हो त्यो मात्र सही हो।
त्यसो भए यसको अर्थ के Quintessential Quintuplet सीजन2को सम्बन्धमा हो? ठिक छ यसको अर्थ यो अत्यधिक सम्भावना हो र हामी तपाइँलाई किन यति पढिरहनु पर्ने कारणहरू बताउनेछौं।
त्यसोभए किनकि हामीलाई थाहा छ कि मूल सामग्री त्यहाँ छ र हामी जान्दछौं कि यो समस्याले कसैलाई वा कुनै पनि स्टुडियोलाई म ad्गालाई अनुकूलन गर्नबाट रोक्दैन Go-Tōbun No Hanayome। यो ठूलो समाचार हो किनकि यसको मतलब त्यहाँ दोस्रो सत्र हुँदैछ वास्तवमा केहि छैन। हामीले हेर्नुपर्ने दोस्रो बुँदा मूल निर्माताले के भनेका छन।
भर्खरको ट्वीटर पोस्टमा हुरुबाले मा volume्गाले निष्कर्ष निकाल्ने छ जब खण्ड १ 14 लेखिएको थियो। त्यसैले यदि केवल4खण्डहरू मौसम १ को लागि म from्गाबाट अनुकूलित गरिएको थियो भने, यसको मतलब त्यहाँ १० थप खण्डहरू पनि अनुकूलित हुन सकिन्छ यदि हामी सिर्जनाकर्ताले भनेका अनुसार चल्यौं भने। यो कथनले हामीलाई हेज उप चरित्रको प्रश्नको साथ सहयोग गर्दछ सबै Quintessential Quintuplet एक सीजन 1 प्राप्त मा एक उपस्थिति गर्दछ।
यो दोस्रो सत्रको लागि सजीलो पर्याप्त छ र हुनसक्छ तेस्रो पनि। म दोस्रो सत्र र त्यसपछि तेस्रो अन्तिम सत्र गर्न सक्छु। मलाई लाग्दैन कि उनीहरू बाँकी १० खण्डहरू दोस्रो सत्रमा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्।
हाल, Haruba ले केवल vol खण्डहरू लेखेको छ, त्यसैले अझै9खण्डहरू जान बाँकी छ। त्यो थोरैमा पनि तन्काइदैन र यो पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सम्भावित परिणाम टीबीएस हरुबाको सबै खण्डहरू समाप्त गर्न पर्खिरहेको हुन सक्छ। यसको मतलब तिनीहरूसँग उनीहरूको दोस्रो अनुकूलनको लागि चाहिने सबै कुरा छ।
2 मौसम कहिले हावा हुन्छ? - Quintessential Quintuplet - सीजन 2
मैले माथि छलफल गरेको सबै कुरा दिईएकोमा are कारकहरू छन् जुन प्रभाव पार्छ जब Quintessential Quintuplet को दोस्रो सत्र प्रसारण हुनेछ। तिनीहरू मुख्य रूपमा यसमा निर्भर छन् कि यदि उसले आफूले भनेको मौलिक खण्ड पूरा गरे भने र उसले यो १ volume मा समाप्त हुन्छ भने। हारुबाले भोल्यूम to सम्म written खण्डहरू अनुकूलन गरिसकेका छन्। त्यसैले यी कारकहरू हुन्:
हरुबालाई Quintessential Quintuplet को सबै खण्डहरू समाप्त गर्न समय लाग्छ।
यदि TBS वा अन्य नेटवर्कले उपलब्ध भोल्यूमहरू मार्फत दोस्रो लगातार सीजन वित्त र अनुकूलन गर्न सक्षम छ।
समयको लागी TBS वा अर्को स्टुडियो Quintessential Quintuplet को दोस्रो सत्र पूरा गर्न
दोस्रो सीजनले पनि उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिले TBS लाई पूर्व उत्पादन पूरा गर्न लाग्ने समय लाग्छ।
र पछिको प्रकाशन समय।
साथै रिलिज समय र कति समय लाग्नेछ।
त्यसैले हामी अनुमान लगाउँदछौं Quintessential Quintuplet सीजन2२०२१ वा २०२२ मा प्रसारित हुनेछ। यो सायद जनवरीको रूपमा प्रारम्भिक महिनामा प्रसारित हुनेछ जुन यो पहिलो सत्र जारी भएको समयको अनुरूप हो। त्यसोभए तपाइँले देख्न सक्नुहुन्छ कि Quintessential Quintuplet को एक सीजन २ धेरै सम्भावित छ र तपाइँ हामी कहाँबाट यो जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी आशा गर्दछौं कि यो तपाईंको लागि उपयोगी भएको छ र तपाईं तल यस्तै लेख जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
Hyouka मा लेख
लेख कालो लगून
डेटिलको हाईस्कूलमा आर्टिलिस
तपाईं लिफ्ट डम्बेलहरू कति भारी छन् भन्ने लेख?
हाम्रो चरित्र प्रोफाइल पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्
टैग: Quintessential Quintuplet Quintessential Quintuplet को दोस्रो सीजन Quintessential Quintuplet Quintessential quintuplet artcile सीजन2youtube का लागि quintessential quintuplet लेख Quintessential quintuplet लेख सीजन २ नयाँ मौसम नयाँ वर्ष quintessential quintuplet समीक्षा quintessential quintuplet सीजन2एयर मिति quintessential quintuplet सीजन2मिति Quintessential quintuplet सीजन2प्रीमियर मिति Quintessential quintuplet दोस्रो लेख Quintessential quintuplet अनुमान मिति quintessential quintuplet सीजन2लेख Quintessential quintuplet सीजन २ हवा कहिले हुन्छ? Quintessential Quintuplet एक दोस्रो सीजन प्राप्त गर्नेछ? YouTube
अघिल्लो प्रविष्टि किन कालो लगुन सिजन get प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ
अर्को प्रविष्टि एउटा मौन आवाज २ - के यो सम्भव छ?